Buufata Xiyyaaraa Finfinnee Boolee: Buufataalee xiyyaaraa gurguddoo shanan Afriikaa keessaa - BBC News Afaan Oromoo
Buufanni Xayyaaraa Idil-Addunyaa Finfinnee Boolee, Dilbata dabre hojii babal'inaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 363 baasuun xumure eebbisiiseera.
Tarminaalli haarayaa kunis, tarminaala dura ture dachaa sadiin kan guddisedha. Kunis humna buufatichi amma qabu, waggaatti imaltoota miiliyoona 7rraa gara miiliyoona 22tti akka guddisu eegama.
Sirna eebbaa tarminaala kanaafi hoteela imaltootaa Skylight jedhamu bananii kan eebbisan MM Itoophiyaa Abiy Ahimad, '''Daandiin Xayyaaraa Itoophiyaa mallattoo biyyattiin itti boontudha,'' jedhaniiru.
'Paayileetiin osoo rafuu xiyyaarri bakka buufatasaa darbee deeme'
Maqaa waloo Itoophiyaa jedhuufi alaabaa keenya baatee waan socho'uuf mallattoo addaati. Hojjettoota kaampaanichaa biyya keessaa fi ala jirtaniif, iddoo deemnu maratti waahee keessan boonnee akka dubbannu beekuu qabdu,'' jechuun dubbataniiru.
Hojiin babal'inaa eebbifame kunis buufaticha, buufatoota xayyaaraa Afriikaa keessa jiran keessaa humna lakkoofsa imaltootaa deddeebisuu buufatichi qabuun, tarree isaan jalqabaa keessa galcha jedhameera.
Walbira qabuuf akka isin gargaarutti, Afriikaa keessaa buufataalee xayyaaraa gurguddoo shanan akka itti aanuutti isinii dhiyeessineerra.*
Buufata Idil-addunyaa Kaayiroo, Masrii
Buufanni xiyyaaraa kun imaltoota deddeebisuun Afriikaa keessaa sadarkaa lammaffaarra haa argamu malee, dandeettii imaltoota keessummeessuun ardii kana keessaa isa jalqabaati.
Tarminaala haarayaa bara 2016tti xumurameen waggaatti imaltoota miiliyoona 30 keessummeessuuf dandeettii qaba.
ALA bara 2014tti buufati xayyaaraa kun imaltoota 14,684,892 daddabarsuu danda'eera.
Buufata Xayyaaraa Idil-addunyaa Oliver Tambo, Johaanisberg, Afriikaa Kibbaa
Buufanni Xayyaaraa Idil-addunyaa Oliivar Taamboo maqaasaa kan argate, walabummaa Afriikaa Kibbaaf gahee olaanaa kan taphatan Abba Oliivar Reejinaald Taamboo irraati. Michuuwwan isaa O.R. jedhanii yaamuun.
Buufanni Xayyaaraa kun, waggaatti imaltoota miiliyoona 28 deddeebisuu kan danda'u wayita tahu, bara dabre keessa imaltoota miiliyoona 18'f tajaajila kenneera.
Bara 2014 keessa imaltoonni miiliyoona 19 ol gara Buufata OR Taamboo fi buufata kana keessaa balali'aniiru.
Buufata Idil-Addunyaa Finfinnee Boolee, Itoophiyaa
ALA bara 2003 tajaajila kennuu kan eegale buufati xayyaaraa kun, guyyaatti imaltoota 53,000 tahaniif tajaajila kennuu danda'a.
Hojii babal'inaa dhiyeenya kana eebbifamee banameen booda ammoo, waggaatti imaltoota qilleensaa miiliyoona 22 keessummeessuu danda'a.
Odeeffannoo marsariitii kanarraa (as cuqaasi) irraa argame akka mullisutti, ALA bara 2016tti buufati xayyaaraa kun imaltoota qilleensarraa 8,900,000 ta'aniif tajaajila kenneera.
Buufata Xayyaaraa Idil-addunyaa Keepp Taawon, Afriikaa Kibbaa
Buufanni xiyyaaraa idil-addunyaa Keepp Taawon, Afriikaa Kibbaa gidduu magaalaa Keepp Taawon irraa km 20 fagaate argama.
Buufanni xayyaaraa kun tajaajila maamiltootaaf kennuun Afriikaa keessa isa filatamaa tahuun yeroo hedduu badhaafama.
Buufanni xayyaaraa kun bara 2017/18 keessa imaltoota miiliyoona 10 oliif tajaajila kenneera.
Buufata Xaayyaaraa Idil-addunyaa Murtaalaa Muhaammad, Leegoos, Naayijeeriyaa
Buufanni xiyyaaraa kun ifatti kan baname ALA 1979tti yoo tahu, kunis buufata xayyaaraa daandiilee xayyaaraa biyyaalessaa Air Nigeria and Arik Air tahuun tajaajila.
Buufanni Xayyaaraa idil-addunyaa Murtaalaa Muhaammad ALA 2015tti imaltoota miiliyoona 7 ol deddeebisuu danda'eera.
*Tarree kana kan qindeessine sadarkaa dandeettii buufataaleen xayyaaraa imaltoota waggaatti deddeebisuu danda'aniin. Buufataaleen xiyyaaraa kunniin tajaajiloota biroon daran walcaaluu danda'u.
Itoophiyaa-Ertiraa: Xayyaarri Itoophiyaa ganna 20 booda Asmaraatti balali'e
Awustiraaliyaatti paayileetiin osoo rafuu xiyyaara oofaa ture bakka deemu darbee dammaqe
Gaanaatti saaxiniin reeffaa akka jireenya, hawwiifi abjuu nama du'eetti qophaa'a
Hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne 40 Buufata Xiyaaraa Maqaleetti